I-L'Estanco, ezolile kanye ne-voluptuousness eduze kwase-Gérardmer - I-Airbnb
I-L'Estanco, ezolile kanye ne-voluptuousness eduze kwase-Gérardmer
Sapois, Grand Est, i-France
I-i-loft ephelele ibungazwe ngu-Olivier&Ariane
U-Olivier&Ariane Ungumbungazi ovelele
Isitudiyo sethu esingu-40m2 esifakwe umoya we-chalet esibayeni esidala, esifakwe kamnandi, sitholakala enhliziyweni yemvelo endaweni yokuphakama engu-550m e-Hautes Vosges, ibanga lokuphonswa kwetshe ukusuka e-Gérardmer.
Kuthule kakhulu futhi kuphumule, ngaphandle kwendlu yethu unokufinyelela kwangasese endaweni yokuhlala enethala layo eliyimfihlo.
Imizuzu engu-10 kusukela Lake Gérardmer kanye zokushushuluza eqhweni La Bresse futhi Gérardmer, iphoyinti ngoba Kuzonyuka kanye amathuba for imisebenzi eminingi (bowling, ice rink, ntaba ngebhayisikili, neyezamasiko) ungathola lo Vosges ngesithuthuthu (kagesi noma cha) phezu emigwaqweni eluhlaza, kuSegway, ngemuva kwembongolo noma umane uzinike isikhathi sokuphefumula...
4.96 · 176 okushiwo abanye
Itholakala maphakathi nemvelo enhliziyweni ye-Hautes Vosges, imizuzu eyi-10 ukusuka e-Gérardmer nemizuzu engu-15 ukusuka e-La Bresse, isitudiyo sethu sesitayela se-chalet sikuthembisa ukuhlala okuzolile nokunethezeka.
Ungakwazi ukujabulela ithala kanye nengadi yangasese.
Ifulethi lisha futhi lakhiwe ngezinto zemvelo.
Siyakwamukela kuma-Vosges aphezulu!
Indawo yokuhlala ihlukene nendlu yethu, sizobe sihlakaniphile kodwa sitholakala njalo ukunazisa, bomdabu basesigodini singakusiza ukuthi nithole amaVosges ethu aphakeme ngokuphuma emgwaqeni.
UOlivier&Ariane Ungumbungazi ovelele
Hlola ezinye izinketho ezise- Sapois namaphethelo